KARIISMA MIYAA LAGU DHASHAA MISE WAA LA KASBAN KARAA? – Somali Paper
KARIISMA MIYAA LAGU DHASHAA MISE WAA LA KASBAN KARAA?
Waxaa la daabacay July 31, 2017
Kaarisma waa Eray asal ahaan ka soo jeeda afka giriiga oo macnahiisu yahay (HIBO EEBE) taas oo ah sifo lagu Ladho shakhsi leh soo jiidasho iyo sifooyin hogaamiye oo ka duwan dadka intiisa kale. waxaa kale oo calaamadaha Kaarismaha ka mid ah in uu yahay shakhi saameyntiisa bulsho iyo siyaasadeed ay si xoogan u muuqato , awoodana furdaaminta arimaha kuwooda adadag, run ahaantiina waxaas oo dhami waa sifooyin badhaxla’a oo lagu yaqaano hogaamiyaha dhabta ah.
Hadaba qof kasta oo inaga mid ah waxa uu leeyahay shakhsiyad u Gaar ah oo uu dadka kale kaga duwan yahay .
Laga yaabe in dadka qaar rumaysan yahiin sifooyinka caynkaas ah in lagu manaystay dad gooni ah.
Hadaba waxaa inoo banaan in aynu is-wediino kaarisma ma wax loo dhashaa mise waa la kasban karaa? Inkasta oo ay tahay dood dheer hadana aragtiyaha doodaa ku xeeran si dulmar aha ayaynu sadaradan hoose ugaga hadli doonaa inaga oon hoos u sii quusin doodaas.
Kariisma miyaa lagu soo dhashaa mise waa la kasbadaa?
Waxa ay dad badani aaminsan yahiin in kaarismadu tahay sifooyin lagu soo dhasho halka ay culumada arimaha bulshdu sheegayaan in ay tahay sifo la baran karo. balse si taa loo gaadho ay haboon tahay in la kordhiyo wacyiga iyo garaadka qofka , lana xoojiyo xidhiidhka dadka kale iyo la dhaqankooda .
Xaqiiqduna waxay ay tahay dhamaanteen waxaynu leenahay awood inagu abuuran sidaa darteed ma aha hibo Gooni ah iyo deeqo dadka qaar loogu roonaaday , laakiin waa sifooyin la kasban karo lana baran karo.
Tababarka nafta iyo laylinteeda ayaa hadaba ka qayb-qaata in uu qofka ku guulaysto hadafkiisa taasina waxa ay Dahaadhka ka qaadysaa inta ay le’egtahay awooda qofka.
Qofkii ugu horeeyay ee adeegsada ereyga kariisma
Max Waber oo ahaa caalim jarmal ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasada ku takhakhusay ayaa isagu ahaa qofkii ugu horeeyay adeegsada kaariisma isaga oo farta ku fiiqaya in ay tahay awood qofka ku duugan oo uu ku saamayn Karo dadka intiisa kale.
Qayb ka mid Calaamadaha lagu garto qofka kaarismada leh
Dulqaad dhagysi ee araada kala duwan
Awood kasbasho dadka kale